Ujyaalo Sandesh | » दैवले बचायो ! चालक झ्यालबाट हाम्फालेर बेपत्ता भए दैवले बचायो ! चालक झ्यालबाट हाम्फालेर बेपत्ता भए – Ujyaalo Sandesh
दैवले बचायो ! चालक झ्यालबाट हाम्फालेर बेपत्ता भए
उज्यालो सन्देश December 15, 2019
२९ मंसिर (सिन्धुपाल्चोक)
हिउँले ढाकेको रमाइलो हेरिसकेपछि कालिञ्चोक माई मन्दिर दर्शन गर्न गएको दिपक तामांगले बताए । दर्शन गरिसकेपछि गएका जति सबै एउटै बसमा फर्कियौं । बसमा ३० जना जति थियौं। राति नै फर्किदा बाटो गाह्रो भएकाले दुर्घटना हुनसक्ने डरले लिसंखुपाखरको मुडे बजारमा बस्यौं। आइतबार बिहानै मुडेबाट झरियो। सबैजना हासीखुसी थिए।